Maalmihii la soo dhaafay ayaa waxa sitoos ah ugu furmay cayaarihii kubadda kolayga ee dadoodu u dhaxeesay 7-13(TEENAGER) iyo dadka waaween(ADULT) Gobolka minnesota ay Soomaalidu buuxdhaafisay ee ciyaaro iyo damaashaadyo loogu magacdaray Todabaadka Soomaalida (Somali Week), oo ay soo qaban qaabiyeen cayaaryahanadii qaran ee kubada kolayga iyo ku da'da yare ee hadda ku nool gobolka minnesota Isla markaasna lagu xusayay maalintii ay xuroobeen kooforta Soomaaliya iyo isu taggii labada gobol ee Waqooyi Iyo Koonfur.
Munaasibadan oo lagu soo bandhigay cayaaro ay dadkii daawanayay si aad ugu doorsadeen.Koobkan ayaa hadaba waxa si xirfadaysan ugu tartamay 18 kooxood oo ka kala yimid Dunida daafaheeda sida Yurub, Canada iyo gobalada kala gadisan ee dalkan Mareykanka.
Ciyaarahaas oo dhamaantoodba ahaa kuwa xiiso iyo xaamaasad badan. Cayaarahaas oo maalinba maalinta ka dambeysa laysugu xoog sheeganayey ayaa waxaa laysla soo gaaray FINALKA ama ugu dambeyntii ay isugu soo hadheen labada kooxood oo kala ah VIA ROMA oo ka sacotay Minnesota iyo Toronta oo kasacotay Canada.
Ciyaarahaas oo run ahaantii aheyd mid xiiso leh oo ay laba kooxoodba banaanka soo dhigeen wixii ay khibrad iyo tobabarba qabeen si ay u hantaan guusha Koobka. Balse waxay ku dhamaatay TORONTA 53 VIA ROMA 48 iyadoo halkaa guushii ku raacday kooxdii toronta,CANADA.
Waxa xusid mudan oo aan marna la iloobin karin afeeyay oo wiil yar oo dhalinyara ah oo isku taxalujiyay in uu isku keeno cayaarahanadd walina ku doonsiiyo qaar ka mid ah cayaartoodii sida fiican u cayaartay bilshar ay muteesteen.
Gabagabadii Mubnaasabaddaasi waxay ahayd mid dadkii ka soo qeyb galey ay si aad ah ugu riyaaqeen waxyaabihii halkaas ka socda iyo farxaddii ay is dhaafsanayeen dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolkan Minnesota oo had iyo jeer aad u weyneeya Maalmaha qaddarinta mudan ee Gobanimada Soomaaliya.